Ohatra amin'ny famolavolana sary | Creatives Online
Nanolotra valiny ho antsika nandritra ny taona maro ny famolavolana sary. Ny sasany dia tsy mampino, ary ny hafa dia tsy voamarika. Fa ny mazava dia hoe, n'aiza n'aiza no hijerena dia hifankahita ohatra momba ny famolavolana sary.
Amin'ity indray mitoraka ity, tianay ny hanakaiky anao ny sasany amin'ireo ohatra ireo mba hahitanao ny fomba, tamin'ny fotoan'androny, dia nahavariana sy nahatonga ny mpamorona sy ny mpamorona hankany amin'ny laza sy ny fahombiazana. Tsy mino izany ve ianao? Jereo ireo natambatray ho anao.
1 Juice voasary Sunkist
2 Vitantsika io
3 Absolut vodka
4 Mieritrereta hafa, Apple
5 "Tiako ianao ho an'ny tafika amerikana"
6 "Tournée du Chat Noir"
7 "Moulin Rouge: La Goulue"
8 labiera Sapporo
Juice voasary Sunkist
Tena azo inoana fa tsy mahazatra anao ny marika ranom-boasary. Saingy iray amin'ireo nanova ny famolavolana sary.
Ary izany, tamin'izany fotoana izany, ary Miresaka momba ny taona 1907 isika, nasaina nanao peta-drindrina ireo mpamorona. Ianao veInona no noeritreretin’izy ireo? Eny, satria nanana voasary be dia be ny mpamboly any Kalifornia, ary very ny fidiram-bolany noho ny tsy maintsy nariany, dia nanapa-kevitra ny hanao ranom-boasary izy ireo.
Noho izany, ankoatra ny fivarotana ny voasary, dia nanome ranom-boasary makirana ihany koa izy ireo, izay tena neken'ny besinimaro (tadidio fa any Amerika dia fanao ny misotro ranom-boasary isaky ny maraina).
Manao ahoana izany aminao? Eny ary dia hita fa a Afisy tranainy be, nanomboka tamin'ny 1942 manokana, ary iray amin'ireo ohatra amin'ny famolavolana sary izay naharitra nandritra ny taona maro. Amin'izao fotoana izao isika dia mihevitra fa fanevan'ny feminisma izy io, saingy ny marina dia tsy toy izany ny fiaviany.
Mba hanaovana izany dia tsy maintsy Miverena any amin'ny orinasa Westinghouse Electric. Tsy dia nanana mpiasa firy izy ireo tamin'izany satria nisoratra anarana tamin'ny Ady Lehibe Faharoa ireo lehilahy ireo.
Noho izany antony izany dia nanapa-kevitra ny orinasa hamorona afisy manasa vehivavy hiasa amin'ny fanamboarana saron-doha ho an'ny miaramila. Noho izany dia teraka ity afisy ity izay, tamin'ny taona 70, dia noraisina ho tsara indrindra amin'ny fanamarinana ny zon'ny vehivavy.
Ity marika ity dia iray amin'ireo aseho hatrany ho iray amin'ireo ohatra lehibe amin'ny famolavolana sary. Ary indraindray izy dia nilalao lalao teny, na tamin'ny peta-drindrina tena mahavariana ka tsy ho voamarika.
Ohatra amin'izany ny an'ny teny filamatra "Tendrombohitra tanteraka", fantatra ihany koa amin'ny hoe "survivor tanteraka". Raha mijery akaiky ianao, dia tazana eny lavitra eny ny nosy efitra misy afo izay miakatra any an-danitra ny setroka, ary misy soratra hoe “fanampiana” voasoratra ao anaty fasika.
Avy eo ianao dia manana ny tavoahangy, izay tokony ho hafatra mangataka fanampiana ... Sa vodka bebe kokoa?
Mieritrereta hafa, Apple
Tsy isalasalana fa miara-miasa ny Apple sy ny "Think Different". Steve Jobs mihitsy no nilaza izany: "Ny dokam-barotra dia ny zava-drehetra." Izany no nahatonga ny fanentanana "Think Different", izay naharitra tamin'ny 1997 ka hatramin'ny 2002, no iray amin'ireo ohatra tsara indrindra amin'ny famolavolana sary. Ary izay ihany Izany dia ahitana ny fanolorana ny paoma icon, ary eo ambaniny, ny teny roa "Think different", amin'ny teny anglisy, "Think differently", amin'ny teny espaniola. Saingy tsy ny fahombiazana ihany.
Ny iray hafa izay anisan'ny zava-bitan'i Apple ihany koa, ary 4 taona nanome fahombiazana, dia ny "Silhoette", fanentanana maroloko, mampiala voly ary tena mozika.
"Tiako ianao ho an'ny tafika amerikana"
Azo atao angamba fa raha ataontsika izany dia tsy ho fantatrao izany, fa azo antoka fa io sarin'i Dadatoa Sam' io dia tonga ao an-tsainao manondro eo anoloana, eo aminao, eo amin'ny toerana eo anelanelan'ny tia karokaroka sy ny mpihanika, mamporisika anao hiditra. ny tafika amerikana. Ary izany tokoa no afisy lazainay aminao.
Raha tsy fantatrao, Tamin'ny 1917 no niseho voalohany, rehefa namorona azy io ny Amerikana James Montgomery Flagg ho iray amin'ireo fitaovana fandraisana miaramila vaovao ho an'ny Ady Lehibe Voalohany.
Na izany aza, ary mety tsy ho fantatrao izany, dia tena "plagiarisme" kely tokoa ilay izy, na farafaharatsiny tsy tena original, satria ny mpanoratra mihitsy no niaiky fa nahazo aingam-panahy avy amin'ny afisy hafa izay efa antitra lavitra, avy amin'ny Alfred Leete. Ao anatin'izany dia afaka mahita ny Sekreteram-panjakana britanika tamin'izany fotoana izany ianao manondro izay nahita ny afisy ary manontany azy ireo zavatra mitovy amin'ny fandraisana tanora britanika.
Tsy isalasalana fa ity no iray amin'ireo ohatra amin'ny famolavolana sary izay tsy azonao adino. Mifanitsy amin'ny 1896 manokana izy io ary nataon'ilay mpamorona Soisa Théophile Steinlen.
Ny antony dia ny fampiroboroboana ny fitsidihana ny orinasa cabaret Chat Noir ary niantehitra tamin'ny modernisme ny mpanoratra mba hanehoana sary sy typography izay tsy mamela na iza na iza tsy hiraharaha.
"Moulin Rouge: La Goulue"
Taona vitsivitsy talohan'izay, indrindra tamin'ny 1891, dia manana ohatra iray hafa amin'ny famolavolana sary izay nanao tantara isika. Ny mpilalao sarimihetsika? Toulouse Latrec.
Ny antony dia izay ambarao ny cabaret Moulin Rouge, ilay malaza indrindra tamin'izany fotoana izany, ary vaky lasitra ilay afisy. Nifantoka tamin'ny fampiroboroboana seho iray izay ny mpilalao fototra dia ilay mpandihy Louise Weber, ilay 'mpanjakavavin'ny can-can'. Ny fomba nanehoany izany, araka ny filazan’ny maro, no niteraka ny dokam-barotra maoderina.
Sapporo, raha tsy fantatrao, dia tanàna ao Japana izay mirehareha amin'ny labierany. Koa rehefa tsy maintsy nanao dokambarotra izy ireo dia nisafidy ny a lahatsary famoronana izay noho ny Internet ankehitriny dia afaka nahita sy nahaliana ny rehetra.
Ao anatin'izany, ary miaraka amin'ny teny filamatra 'Legendary biru', nasehon'izy ireo ny fitsipi-pifehezana japoney sy ny firaisana nisy teo amin'ny taloha sy ny maoderina. Mazava ho azy fa raha te hahita izay resahinay dia tsy maintsy mahita izany ianao.
Miaraka amin'ny andian-teny hoe "Ny fomba fifohazana isa-maraina", ny marika Nescafé dia nanolotra anay a afisy misy famantaranandro fanairana. Saingy, raha tokony hanana ny ora sy minitra ao anatiny, dia feno kafe mainty izy io, mety tsara mba tsy hatoriana rehefa mifoha.
Izany no niova ary nahatonga ny maro ho tia misotro kafe raha vao mifoha.
Mahafantatra ohatra bebe kokoa momba ny famolavolana sary ve ianao? Azo antoka fa misy maro hafa, tsy any Espaina ihany, fa manerana izao tontolo izao, koa, raha tianao, dia azonao atao ny milaza aminay mba hahalalan'ny olona bebe kokoa momba azy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ohatra amin'ny famolavolana sary
Inona no atao hoe portfolio?